Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL I-Michael Obafemi Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
Imininingwane yethu ye-Biography kaMichael Obafemi uyazisa ngeNdaba yakhe Yobuntwana, Ukuphila Komndeni, Bazali, Impilo Yothando (Intombazane Nomfazi), Indlela Yokuphila, Networth kanye Nempilo Yomuntu. Kafushane nje, sikunikeza isithombe esigcwele somlando wakhe wokuphila, kusukela esemncane kuze kube lapho eduma khona.
Yebo, wonke umuntu uyazi igama lomndeni wakhe kaMichael Obafemi likhumbuza omunye ngalo Obafemi Martins- lelo phambili laseNigeria elaziwa ngejubane lokuduma. Kodwa-ke, ababaningi abaye bafunda i-Biography kaMichael Obafemi eyembula okuningi ngaye. Manje, ngaphandle kokuqhubeka kwesikhathi ake siqale.
Indaba Yobuntwana KaMichael:
Okwakuqala i-Biography, ubizwa ngokuthi “Mica.” UMichael Oluwadurotimi Obafemiwas wazalwa ngosuku lwe-6 kuJulayi 2000 enhloko-dolobha yaseDublin e-Ireland. Umsubathi webhola wase-Ireland wazalelwa kunina, uNksz Bolajoko Oredein futhi kubaba omncane owaziwayo.
Imvelaphi yomndeni kaMichael Obafemi:
Okokuqala nokubaluleke kakhulu, umgadli uyisakhamuzi sase-Ireland. Kodwa-ke, imiphumela yocwaningo olwenziwe ukuthola ukuthi imvelaphi yomndeni kaMichael Obafemi ikhombisa ukuthi ungowesizwe saseYoruba.
Lesi sizwe sobukhosi sibusa ingxenye enkulu yeNtshonalanga yeNigeria. Ngokuchaza, abazali bakaMichael Obafemi bangama-Afrika kanye nezimpande zaseNigeria. Umgcini webhola uqobo ungowase-Ireland futhi unegazi laseNigeria eligeleza emithanjeni yakhe.
UMichael Obafemi Ukhula Iminyaka:
Ubuwazi ukuthi ubuhlakani bebhola wayesemncane kakhulu ngenkathi uyise nonina bethuthela eNgilandi? Kwakusezweni lapho u-Obafemi oneminyaka emine aqala ukudlala ibhola nomfowabo omdala u-Afolabi Obafemi.
“Sasidlala njalo ibhola ngaphandle komuzi wami kukhonkolo. Umkhuba wethu ufaka ukukhahlela amabhola uthango lomakhelwane kuze kube yilapho sehlisa umoya, ”
uphawula umgadli ekuqaleni kwakhe ebholeni.
Isizinda Somndeni SikaMichael Obafemi:
Iqiniso ngukuthi, akazange avela emndenini ocebile kakhulu kodwa ophakathi. Ngesikhathi ngise-England, abazali bakaMichael Obafemi bahlala eChingford. Le ndawo yisifunda esingaphansi kwedolobha eNorth East London. Ubaba kamama noMichael Obafemi baqinisekise ukuthi unakekelwa kahle. Ngakho-ke, wakhula ejabule njengezingane eziningi endaweni eseduze yaseNorth East London.
Ukuqala Kanjani Ibhola LikaMichael
Lapho isikhathi silungile, isiphetho somthandi webhola saqala ukubiza. Ngaleso sikhathi, abazali bakaMichael Obafemi babona kufanelekile ukuthi banikeze uthando lwayo isiqondiso esikhiqizayo. Ngenxa yalokho, babona ukuthi ubhalisele ukuqeqeshwa esikhungweni sabafana - iRyan FC eChingford.
UMichael Obafemi Iminyaka Yasekuqaleni neChelsea, i-Arsenal neWatford:
Ukuthuthuka komncane eChingford kwashesha kangangokuba waqhubeka nokuchitha ezinye izinkathi zomsebenzi wakhe ezifundweni ezahlukene zebhola. Izifundo zifaka iChelsea, i-Arsenal neWatford.
UMichael Obafemi Childhood Indaba- Wayenomsebenzi wakhe wokwakha ezikhungweni eziningi zebhola. 📷: I-Twimg.
Eqophelweni lomsebenzi wentsha ka-Obafemi eWatford, umsakazi webhola kuyaziwa ukuthi uthole ngemuva kwe-net amahlandla ayi-11 emidlalweni eyodwa. Ngemuva kwalokho, wadedelwa yikilabhu esemncane ngeminyaka eyi-14.
UMichael Obafemi Biography - Indaba Yodumo:
Ngemuva kokukhishwa kwebhola lezinyawo kuWatford, uthathe unyaka uphuma kulo mdlalo omkhulu ukuze abheke ukuthi ngabe ulifuna ngempela yini ibhola njengemidlalo yezemidlalo noma cha. Wabuye wacabanga nezindlela eziningi zomsebenzi angazihambela uma ibhola lingahambi kahle. Njengoba bemthanda, abazali bakaMichael Obafemi babekhona bezomduduza ngaleso sikhathi sokuphila kwakhe.
Lapho enza isinqumo sakhe, le ntombazane eneminyaka engu-15 yahlala nonina ukuze babelane naye ngezinhlelo zakhe zekusasa. Umama ka-Obafemi wamsekela ngokugcwele, emncenga ukuthi anikele nge-100% yemizamo yakhe kwezemidlalo. Ngenxa yeseluleko sabazali, umsakazi webhola wase-Ireland ubuyela emuva kwinto yakhe yakudala.
Akubanga isikhathi eside ngaphambi kokuthi i-football prodigy ijoyine iLeyton Orient ngo-2015 unyaka owodwa. Ngokuhamba kwesikhathi wasayina eSouthampton ngonyaka ka-2016. Waqhubeka nokwenza i-Dutts yakhe yezobuchwepheshe ngoJanuwari 2018 ngesikhathi sokudweba okuyi-1 neTottenham Hotspur.
Ngaleso sikhathi sokuqala, u-Obafemi waba ngumdlali wesibili kunabo bonke ukwenza ukubukeka kwePremier League eSouthampton ngemuva ULuka Shaw (Iminyaka eyi-17 nezinsuku eziyi-116 ubudala). Ezinyangeni ezedlule ngoDisemba 2018, u-Obafemi waba ngumgadli omncane kunabo bonke eSouthampton kuPremier League ngemuva kokushaya igoli lakhe lokuqala kubaSaints ngo 3-1 eWorddersfield.
Kusukela lapho, wayesezenzele igama ngokushaya emakilabhini amakhulu- okwakamuva nje kwakuhlukumeza amathemba kaMan United wokuthola isicoco seligi ngemuva kokuqalwa kabusha kwebhola likanobhutshuzwayo ngo-2019/2020 COVID-19. Kuyindaba yesikhathi kuphela ngaphambi kokuba ajwayele ukwenza lokho, sibona amakilabhu amakhulu ecela ukusayinwa kwakhe. Abanye, njengoba besho, umlando.
UMichael Obafemi- Intombazanyana, Umfazi, Ongashadile, Oshade, Izingane?
Amathalente ebhola ngokuhamba kwesikhathi abe makhulu ekugcineni impilo yothando lwawo yangasese. Njengoba kunje kunzima ukutshela ukuthi ngubani intombi kaMichael Obafemi noma uma enomfazi empeleni.
Lo mdlali osazobonwa nanoma iyiphi intokazi engabizwa ngokuthi yintombi yakhe noma unkosikazi wakhe ulwela kanzima ukuthi abengcono kakhulu ebholeni lezindiza. Ngaphandle kwalokho, kungenzeka kungabi isikhathi eside ngaphambi kokuthi sibone izithombe zakhe nentokazi enhle.
UMichael Obafemi Ukuphila Komndeni:
Ukuba nomndeni owesekelayo akungabazeki ukuthi bekuyinto enkulu yokushisekela ugqozi empilweni yomdlali webhola wase-Ireland. Lapha, sikulethela amaqiniso ngabazali bakaMichael Obafemi nezingane zakubo. Sizophinde siveze amaqiniso ngozalo lwakhe. Manje kuyaqala.
Mayelana Nabazali bakaMichael Obafemi:
Okokuqala kodwa okuncane, hhayi okuningi okwaziwayo mayelana nobaba ka-Obafemi Michael. Noma kunjalo, sazi ukuthi umama wakhe uNksz Bolajoko Oredein ungomunye wabalandeli bakhe abakhulu. Ubelokhu ekhona lapho umgadli khona futhi ubekhona lapho ezombona enza isikweletu sakhe sokuqala eqenjini lesizwe lase-Ireland lapho wayeneminyaka engu-18 kuphela ubudala.
Yini enye? IBolajoko Oredein ikwenza kube yiphuzu lesibopho ukuthi ifike kuwona wonke umdlalo wendodana yakhe kungakhathalekile ukuthi usebhentshini noma cha.
Mayelana Nezingane ZikaMichael Obafemi:
U-Afolabi Obafemi ungumfowabo womgadli. Bakhule bedlala ibhola bendawonye futhi bobabili basezinhlwini zentsha yaseLeyton Orient ngaphambi kwemisebenzi yabo ukuthatha izinkomba ezihlukile. Imisebenzi ka-Afolabi ayikhanyisi kangako. Wayedlala kakhulu emiqhudelwaneni ephansi ngaphambi kokufika eWingate & Finchley, e-Isthmian League Premier Division. Nangu u-Afolabi Obafemi.
Hlangana nomfowabo kaMichael Obafemi u-Afolabi. 📷: Izindaba
Mayelana Nezihlobo zikaMichael Obafemi:
Kude nomndeni womgadli, imininingwane yobukhokho bakhe ingalandelwa eNigeria hhayi e-Ireland. Lokhu ikakhulukazi njengoba kuhlobana nogogo nomkhulu wakhe. Ngaphezu kwalokho, omalume baka-Obafemi, omalume, abazala, izingane zomshana nomshana.
Amaqiniso Wempilo Yakho:
Ake siqhubekele phambili empilweni “kaMica” ngaphandle kokuqeqeshwa nabavikeli abahlukumezayo. Ubuwazi ukuthi kukhona ukuvumelana noma nini lapho abangane, umndeni nabalingani beqembu becelwa ukuba bachaze umuntu wakhe?
Bafakazela iqiniso lokuthi u-Obafemi ungumuntu onamandla okwakheka, onamandla, onobuhlakani ngokomzwelo futhi ozifiso njengabantu abanophawu lweZodiac oluyiCancer. Uyakuthanda ukubhukuda, ukuhamba, ukubuka ama-movie, ukuchitha isikhathi sekhwalithi nomndeni nabangane phakathi kwezinye izinto athanda ukuzilibazisa ngazo.
Amaqiniso Wendlela Yokuphila:
Ukwazi ukuthi ingcebo yomdlali webhola lezinyawo nokuthi uyisebenzisa kanjani imali yakhe epokothweni kuzokusiza ekutholeni isithombe esingcono ngaye.
Ukufaneleka KukaMichael Obafemi:
Ngesikhathi sokubhala iBio yakhe (2020), Ubuwazi ukuthi iholo lakhe lonyaka liyingqophamlando ye-600,000 Euro (525,000 Pound)? Lokhu kubeka inethi kaMichael Obafemi ebiza u-1.7 Million Euro. Manje, ake sikutshele ukuthi umgadli uyisebenzisa kanjani imali yakhe.
Akunasayensi ye-rocket yokuthi u-Obafemi waqongelela kanjani umcebo wakhe ngoba ibhola njengoba sazi ukuthi wumdlalo othandwayo. Eqinisweni, imali ayithola ekuvumeleni yanele ukunakekela izimoto zakhe ezihlukile nokugcina indlu ebizayo isebenza.
Amaqiniso kaMichael Obafemi:
Ukubhalwa kwethu ku- “Mica” (igama lakhe lesidlaliso) kuzobe kungaphelele uma singazifezi izidingo zalesi sihloko. Ngaleyo ndlela sikulethela amaqiniso ambalwa mayelana nomuntu osishaya ngenhloso yokukusiza ekutholeni isithombe esiphelele ngaye.
Iqiniso # 1 - FIFA 2020 Isilinganiso:
I-Obafemi inesilinganiso esibi kakhulu se-FIFA 2020 samaphuzu angama-67. Ukulinganisa okunjalo akukhulumi kahle ngesimo sakhe njengo-Striker. Abathandi nakanjani abajabule ngentuthuko futhi bebelokhu bemshayela izingcingo ngokuthuthuka kwakhe.
Iqiniso # 2 - I-Trivia:
Bambalwa kuphela abantu abaziyo ukuthi unyaka wokuzalwa ka-Obafemi - 2000 ubalulekile emicimbini eminingi yezobuchwepheshe. I-Ferris Wheel enkulu kakhulu yeWorris Wheel noma i-Observation World (iLondon eye) yavulwa ngonyaka ka-2000. Kwakungawo futhi lowo nyaka lapho abakwaDot Com Bubble Bursts nezinkulungwane zama-DotComs baqala ukuqhuma.
Iqiniso # 3 -Relion:
U-Obafemi uyiChristain. Eqinisweni, ukuvakashela ikhasi lakhe le-Instagram kuzokuqinisekisa ukuthi uyikholwa, ikakhulukazi uma ubuka ividiyo yeqoqo lokuqalwa kwamakhono womgadli. Isihloko sevidiyo yivesi lebhayibheli elidumile elifundeka kanjena - "Ngingenza zonke izinto ngaye onginika amandla."
Igama eligcwele UMichael Oluwadurotimi Obafemi
Usuku lokuzalwa Usuku lwe-6 kuJulayi 2000
Indawo yokuzalwa IDublin e-Ireland
Ukudlala Isikhundla Phambili
Abazali Nks Bolajoko Oredein (Umama)
Izihlobo Afolabi Obafemi (mfowethu).
Ukuzilibazisa Ukubhukuda, ukuhamba, ukubuka ama-movie nokuchitha isikhathi esiningi nomndeni nabangane
isikejana inflatable Cancer
Ukuphakama 5 izinyawo, 7 inches
Worth net I-1.7 Million Euro
Iholo Ama-600,000 Euro ngonyaka
Siyabonga ngokufunda lokhu kubhala okuqondayo kwi-biography kaMichael Obafemi. Asinakungabazi ukuthi umlando wakhe wokuphila ukunikeze izifundo ngesidingo sokunikela ngakho konke kunoma yini oyithandayo. Uke wahlangabezana nanoma yisiphi isigwebo esingalungile noma esingalungile ngesikhathi sokulanywa? Uma yebo, sicela wenze kahle ukuxhumana nathi noma ushiye umyalezo ebhokisini lokuphawula.
UCharlie Austin Incwadi Yengane Yomntwana Plus Untold Biography Facts
Usuku olushintshiwe: Januwari 24, 2019